Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Canary Island of La Palma dia faritra voajanahary ankehitriny
Ny fanambarana ny faritra misy ny voina dia ahafahan'ny governemanta Espaniola manolotra vola amina tapitrisa tapitrisa euro hanohanana ireo fepetra vonjy maika any La Palma, ary ireo mponina ao amin'ny nosy tratry ny fiasan'ny volkano mahery dia manimba hatrany ny nosy.
Ny nosy La Palma an'ny Canary Espaniola dia miandry rahona misy poizina azo avy amin'ny lava volkano.
Mampanantena fanohanana an-tapitrisany ny governemanta Espaniola satria mbola manimba hatrany an'i La Palma ny hetsika volkano mahery.
Ankehitriny, loharanom-bolam-panjakana an-tapitrisany no afaka madiodio hanohanana ireo fepetra vonjy maika amin'ny La Palma, sy ireo izay voakasiky ny fipoahana.
Ny governemanta Espana dia namoaka fanambarana androany, nanambara ofisialy ny Canary Islands'La Palma, izay mipetraka eo amoron'ny morontsirak'i Afrika Avaratra,' faritra misy loza '.
Fanambaràn'ny faritra voina no mamela ny Governemanta Espaniôla hividianana vola amina tapitrisa dolara amerikana hanohanana ireo fepetra vonjy taitra ao La Palma, ary ireo mponina any amin'ny nosy tratry ny fiasan'ny volkano mahery dia manimba hatrany ny nosy.
Araka ny Governemanta Espaniôla mpitondra teniny, ny governemanta dia nanolotra fonosana voalohany $ 10.5 tapitrisa (12.30 tapitrisa dolara) ho fanampiana ara-bola ho an'i La Palma.
Ahitana € 5 tapitrisa hividianana trano ny fonosana, ny ambiny kosa dia hatokana hividianana fanaka sy kojakojan-tokantrano ilaina aorian'ny famindrana olona an'arivony.
Mitohy mikoriana avy any amin'ny volkano Cumbre Vieja i Lava izay nisokatra ny fisaka tamin'ny 19 septambra taorian'ny tsy nihetsika am-polony taona maro, nandrava trano 600 ary koa fiangonana sy toeram-pambolena akondro teny amin'ny Nosy Canary malaza amin'ny mpizahatany.